8 martsa: hifantohana ny fiarovana ny tontolo iainana | NewsMada
8 martsa: hifantohana ny fiarovana ny tontolo iainana
Par Taratra sur 19/02/2021
Hiavaka tsy toy ny isan-taona ny fanamarihana ny Andron’ny vehivavy, amin’ity taona ity. Samy mankalaza ny azy ny isam-paritra ialana amin’ny fitangoronana be mety hanaparitaka ny valanaretina covid19.
Hifantoka amin’ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fizakan-tenan’ny vehivavy ny lohahevitra hovoizina.Hita fa miha rava ny tontolo iainana amin’izao fotoana ka ny hanavotra izany no katsahina ao anatin’ny fankalazana ny 8 martsa. Hetsika fambolen-kazo sy fanentanana ny vehivavy hahaleotena ara-pivelomana ka tsy hiankin-doha amin’ny lehilahy no tena himasoana sy tokony hataon’ireo fikambanam-behivavy samihafa.
Manaraka izany toromarika izany avokoa ireo fikambanam-behivavy mikasa ny hanao hetsika fa tsy mivaona ho firaisankina amin’ny hetsika fanamarihana ny 8 martsa.
Hisy kosa ny fitetezam-paritra hataon’ny vadin’ny fioham-pirenena, Mialy Rajoelina, mandritra ny herinandro, hanotronana ireo hetsika. Ny 1martsa hatramin’ny 6 martsa no hanatanterahana izany. Hizara fanampiana ho an’ireo fikambanam-behivavy sy hankahery ireo andriambavilanitra isaky ny renivohi-paritany izy amin’izany. Hanatanteraka ny nofon-kena mitam-pihavanana any Antsiranana kosa ny vadin’ny filoham-pirenena, ny 7 sy 8 martsa . Ankoatra izany ny fambolen-kazo, izay iarahana amin’ireo vehivavy sy fikambanana ao amin’ireo distrika mandrafitra ny faritra Diana. Tsy hisy ny fanatrehan’ireo solontena isam-paritra hamonjy izany hetsika izany fa ireo vadina minisitra sy minisitra vehivavy no hanotrona ny vadin’ny fioham-pirenena.